Maalinta: Abriil 30, 2020
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş codsigiisa shaqo ee gaagaaban ayaa la ogolaaday. Bayaanka lagu soo dhigay baraha bulshada (PDP), macluumaadka soo socda waxaa lagu soo daray: “In la yareeyo waxyeelada Covid-19 ee faafisa, taas oo saameysa adduunka oo dhan. [More ...]
Sida ku xusan go'aanka laga qaatay dagaalka lagula jiro coronavirus, bandoowga ayaa la dhaqan gelin doonaa Jimcaha, Sabtida iyo Axadda. Qorshooyinka balaarinta ee IETT ee xirfadleyda daryeelka caafimaadka, ilaalada amniga iyo shaqaalaha kale ee shaqada taga [More ...]
Sida ku xusan go'aanka Ankara Governorate nadaafadeed ee gobolka, taariikhdeedu tahay 19 oo tirsigiisu yahay 01/03, taarikhdu tahay 2020-29.04.2020 Meey 2020, halkaas oo bandoow laga fulin doono baaxadda tillaabooyinka laga qaadi doono cudurka Coronavirus (Covid-27). [More ...]
2 qof, 14 ka mid ah ayaa si xun u dhaawacmay ka dib tareenka ku garaacay gaari xamuul ah oo marayay meel u dhow magaalada Poznan ee galbeedka Poland. Sida ay sheegayaan wararka, shilka ayaa xalay ka dhacay isgoyska heerka ee tuulada Bolechowo, oo u dhow magaalada Poznan ee galbeedka Poland. [More ...]
Degmada Ordu Metropolitan Karşıyaka Waxay ku qabataa shaqo qandho waddo 2,5 km ah oo loo yaqaan boosteejada baska cusub iyo wadada Eskipazar TOKI ee Mahallesi Çiftlik Caddesi. Iyada oo shaqada la qabanayo Karşıyaka Buundada Difaaca Madaniga ah ee Deriska ah [More ...]
Madaxweyne Sekmen wuxuu ka qeyb galay Shirkii Gaadiidka
Duqa Magaalada Erzurum Magaalada Mehmet Sekmen ayaa la kulmay Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Adil Karaismailoğlu iyaga oo u maraya nidaamka shirka fiidiyowga. AK Party Erzurum ku xigeenkiisa Prof. Dr. Raadi Akdağ, Selami Altınok, [More ...]
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) by 2019 iyada oo muddo April, 356 qof oo dadweynaha TEO kootada shaqeeya nidaamka shaqaalaha qoritaanka ayaa ku soo bilowday. Qiyaastii kun qof oo dhibanayaal ah natiijooyinka aan la sharraxin muddo sannad ah [More ...]
Gawaarida hoyga ee shaqaalaha ay soo saartay TCDD Afyonkarahisar 7-da Agaasime Goboleed si ay ula kulmaan hoyga iyo nasashada baahiyaha adeegga dayactirka wadada tareenka, wadayaasha makiinada dhismaha ee goobta shaqada ayaa la qaabilay. TCDD [More ...]
Dowladda hoose ee Antalya waxay qorsheyneysaa inay gaadiid dadweyne siiso shaqaalaha daryeelka caafimaadka, dadweynaha iyo shaqaalaha kale, kuwaas oo ku qasban inay ka shaqeeyaan xaddiga bandowga 30-maalmood, oo bilaaban doona habeenka Abriil 3. 3 maalmood [More ...]
Marka la eego baaxadda Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Heerka 3aad ee Antalya ee Magaala Weynta Antalya, Dumlupınar Boulevard iyo Isgoyska Adnan Selekler Caddesi (Isgoyska Ilaalada Xeebta) waxay joogi doonaan taraafikada 01 maalmood laga bilaabo 2020ka May 15. [More ...]
Republic of Turkey Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha sameeyey iskaashiga Midowga Yurub ee la Istanbul Halkalı-Isbitaalka Mashruuca Tareenka ee Edirne Kapıkule wuxuu soo jiitay ficillo sabab u ah kororka cufnaanta meelaha beeraha. Kuxiriira degmada Havsa ee Edirne [More ...]
Istanbul Ganacsiga University iyo ASELSAN si loo yareeyo ku tiirsanaanta xadiidka dibada ee Turkey, R & D hawlaha qoyska si ay u muujiyaan xal loogu talagalay fulinta maamuuska iskaashi la saxiixay. Qaab dhismeedka borotokoolka, wadada tareenka ugu weyn [More ...]
Qeybta Warshadaha Difaaca iyo Duulista ayaa sidoo kale qeybtooda ka heshay waxyeelada uu keenay viruska Corona, kaasoo ku faafay adduunka oo dhan, kana soo bilaaba Shiinaha. Soosaaridda, keenista, carwada iyo heshiisyada ay sabab u yihiin fayraska dilay kumanaan qof [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoglu ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in shirkadaha looga baahan yahay inay yareeyaan tirada safarada ay ku maraan dadka rakaabka ah ee wadada maraya marka loo eego talaabooyinka laga qaadayo nooca cusub ee coronavirus (Kovid-19). Ku xirida safarada fasaxa [More ...]
Buugga fasaxa 2da fasal waa gole ujeedadiisu yahay inuu soo celiyo cashar kasta iyo maado kasta oo ay bartaan ardayda fasalka 2aad ee dugsiga hoose inta lagu gudajiro sanad dugsiyeedka oo lagu xoojiyo macluumaadka halkaa ka jira. Caadi ahaan fasaxa xagaaga 2aad [More ...]
Medical Health Waxyaabaha Assistance ka Turkey si South Africa, Iyada oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah COVID-19, A400M ee ciidammada Qalabka Sida ee Turkiga oo qalab caafimaad u qaadaya Jamhuuriyadda Koonfur Afrika ayaa dhammaystiray diyaarintooda garoonka Kayseri Erkilet. [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Konya waxay baska siinaysay shaqaalaha caafimaadka Konya ilaa iyo maalintii ugu horeeysay ee lagu soo rogo bandowga. Xannibaadda 3-maalmood ee bandowga, magaaladu waxay sidoo kale joogi doontaa isbitaallada iyo isbitaallada. [More ...]
Iyada oo qayb ka ah tallaabooyinka la qaaday CoD-19 faafa, bandoowga waxaa lagu dabaqi doonaa 1 magaalo magaalo iyo Zonguldak Maajo 2-3-30. In kasta oo dadka daggan Istanbul ay guryahooda joogeen seddex maalmood, unugyo badan iyo laxiriira İBB ayaa awooday [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ka dib markii ay ka talaabsadeen magaalooyinka waaweyn inay fududeeyaan marin u helka muwaadiniinta ee maaskaro caafimaad Karşıyaka dekedaha Bostanlı sidoo kale waa la daboolay. Codsi Maskematic KarşıyakaWaxaa soo dhoweeyay dadka deggan. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir [More ...]
Our xulufada NATO Maraykanka codsado, si ay u taageeraan dagaalka ka dhanka ah Maraykanka ee America si ay u bixiyaan qalabka caafimaadka la Turkey Coronavirus. Turkey Covidien-19 caawiyay wadar ahaan 55 dal oo lagu jiro faafa iyo 3aad ee dunida ugu weyn ee bani'aadamnimada [More ...]
1500 oo xamuul ah, 1 kiilogaraam oo xashiishad ah iyo alaabo kala duwan ayaa lagu qabtay gaari laga shakiyay howlgalka ay ka sameeyeen albaabka Kastamka Kastamka ee Wasaaradda Amniga Kastamka Kastamka Ganacsiga. Yacday ilaa si ay u gasho in si Turkey [More ...]
Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada waxay bixisaa adeegyo taageero nafsi ah oo ka weyn da'da 65, dadka naafada ah, Shuhadada iyo halyeeyada, iyo kuwa karantiil ku jira, kuwa baahan iyo kuwa baahan. telefoonada, [More ...]
Saab wuxuu shaaca ka qaaday Abril 29, 2020 in uu u soo wareejiyay diyaaraddii ugu horreysay ee GlobalEye AEW & C Imaaraadka Carabta. Dowladda Isutagga Imaaraatka Carabtu waxay soo saartay 3 amarro ah GlobalEye AEW & C. United arab [More ...]
Sida ku xusan 'kalandarka caadiga ah' ee looga hadlay shirkii golaha wasiirrada ee uu guddoominayay Madaxweyne Erdogan; Iiddaas ka dib, "boqol boqolkiiba wax caadi ah" ma dhici doonto, laakiin tartiib tartiib ayaa mamnuucidda loo qaadi doonaa meelaha xiranna la furi doonaa. Turkey, marka hore arkay on 11 March [More ...]
Baadhitaanada saynisyahannadu ku sameeyeen masiibada coronavirus, ee saameysa adduunka oo dhan, waxay noo oggolaaneysaa inaan garowno cudurka oo aan tallaabo qaadno. Jaamacadda Harvard waxay shaaca ka qaadday in wasakhowga hawadu kicineyso dhimashada coronavirus, Jaamacadda Bologna [More ...]